Tababarka Qalabka Maaraynta Kumbiyuutarka Kumbiyuutarada SPECTRUM SCHOOL (7E SPECIALIZATION YEAR // FULL-TIME // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
qalabka mashiinka maareynta kumbiyuutarka
7e sannadka khaaska ah
spectrum School > koorsooyinka our > 7e sannadka khaaska ah > qalabka mashiinka Computer-ka taliso
In 7e qalabka mashiinka maareynta kombiyuutarada (waqti buuxa / BSO) waxaad baraneysaa sida mashiinnada mashiinka CNC loo dhiso oo loo shaqeeyo. Waxaad ku takhasustay farsamooyinka CNC ee kala duwan, iyo sidoo kale daabacaadda 3D. Waxaad baraneysaa sida loo sameeyo sawirro xirfadle ah oo xirfad leh, iyada oo la eegayo wax soo saarka CNC. Waxa kale oo aad baraneysaa akhrinta iyo tarjumidda noocyada sawirada. Tani waxay la socotaa Layli.
Meelaha wax ku oolka ah, layliyo shirkad leh qalabka maareynta kumbiyuutarada gacanta lagu qaato, casharro ku saabsan farsamooyinka laga helo IT-da warshadaha iyo farsamada ayaa ah qaabka tababarka. Tababarkeena waxaad kaloo ku takhasuseysaa qalabka waxqabadka, qalabka shaqada iyo qalabka; in la sameeyo dhismo mishiinka kumbiyuutarada lagu xakameeyo waxaadna baraneysaa in la tixgeliyo amniga, deegaanka iyo sicirka qiimaha. Waxaad baraneysaa inaad qorsheyso geeddi-socodka wax-soo-saarka oo aad u habayso haddii loo
Waxaad gali kartaa 7 oo keliya sannadkii haddii aad heshay ugu yaraan shahaadada waxbarashada dugsiga sare. Fikrad ahaan, waxaad hore u heshay tababarka Maaddada Birta: Mashiinnada asaasiga ah (qalabka mashiinka).
Haddii aad gudbisid koorsadan waxaad heli doontaa Dibloomada waxbarashada dugsiga sare. Waxaad bilaabi kartaa dabaqa shaqada ama xitaa bilaabi kartaa ganacsigaaga. Xirfadaha suurtagalka ah waa xaashida birta, mashiinka mashiinka CNC, macmiilaha, shirkadda wax soo saarka, iwm. Kuwani badanaa waa xirfado adag. Sidaas darteed si deg deg ah ayaad ugu bilaabi kartaa qaybtaada Waxaad sii wadan kartaa barashada. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa halkan.
Kala hadal halkan miisaanka casharka ee 7e sannadka takhasuska Kumbiyuutarka Qalabka Kumbiyuutarka (BSO):